Nidaamka kontoroolka dhexe ee madaxa banaan: hal gacan ayaa kor u qaadi kara oo hoos u dhigi kara mashiinka, soo jiidi kara munaaradaha Haydarooliga u eg ee qaabeeya kana dhigaya hubinta 360 ° wareega. Dhululubbooyinku waxay bixiyaan jiiditaan xoog leh iyadoon xoog lagu kaxayn. Dhererka shaqada ee kala duwan (375 ~ 1020mm) waxay ku habboon yihiin hawlwadeenno kala duwan.
Barxadku kor iyo hoos ayuu u qaadi karaa kor iyo hoosba sidoo kale kor u qaadi karo, taas oo hubineysa in dhammaan noocyada shilalka gawaarida ay ka soo degaan oo ka baxaan madal aan wiish lahayn. Dhererka shaqada ee kala duwan (375 ~ 1020mm) waxay ku habboon yihiin hawlwadeenno kala duwan.
MAXIMA Dent Puller Mashiinka Alxanka B3000
Qalabka waxqabadka sare wuxuu hubiyaa alxanka xasilloon.
Tooshka alxanka badan iyo qalabku wuxuu daboolayaa xaalado kala duwan.
Si fudud in loo beddelo shaqooyinka.
Ku habboon in la dayactiro alwaax kala duwan oo khafiif ah.
MAXIMA Mashiinka Alxanka Universal B6000
Isku-darka alxanka tooska ah iyo fidinta hal dhinac ah
Saamaynta alxanka deggan wuxuu qabtaa kiisas kala duwan
Qaboojinta hawada ee la hagaajiyay waxay hubisaa alxanka muddada dheer
Naqshadeynta bini-aadamka waxay xaqiijineysaa hawlgal la isku halleyn karo iyo waxtarka sare
Gudiga xakamaynta sirdoonka ayaa fududeynaya howlgalka
Qalabka dayactirka birta oo dhammeystiran waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta qalabka dibadda.
MAXIMA Mashiinka Alxanka gaashaaman ee BM200
Saddex qoryaha alxanka oo leh seddex alwaax oo alxam ah ayaa si fiican u adeegsanaya iyo waxtarka sare.
Awoodda wax soo saarku waxay ku hagaajin kartaa sida ay doonto.
3 hagaajiyeha buundada PH wuxuu hubiyaa qaanso xasiloon oo xasiloon.
PWM waxay damaanad qaadeysaa quudinta ulaha xasiloon.
Xidhmada quudinta dhejiska ayaa lagu dhejiyay mashiinka alxanka.
Duubka kuleylka badan wuxuu ilaaliyaa alxanka aaminka ah.
MAXIMA Aluminium Jirka Gaaska Gaashaaman Mashiinka Alxanka B300A
Tikniyoolajiyad heer caalami ah oo rogaal celis ah iyo DSP si dijital ah oo dijital ah loo qaatay
Xuduudaha alxanka ayaa si otomaatig ah loo dejin doonaa ka dib hagaajinta kaliya hal halbeeg
Laba nooc oo hawlgal: Shaashadda taabashada iyo badhamada
Xakamaynta wareegga loop si loo hubiyo in xasilloon tahay dhererka qaansada alxanka iyo xoogga sare ee alxanka, lagana ilaaliyo cilladda
B80 Mashiinka Alxanka Aluminium Aluminium
Lagu dabaqi karo qalab kasta oo auto-body ah oo ay ku jiraan aluminium, aluminium aluminium, bir, naxaas.
Tiknoolajiyada rogaal celinta waxay hubisaa waxtarka sare, xasiloonida iyo heerka fashilka hooseeya
Qalabka waxqabadka sare wuxuu hubiyaa alxanka lagu kalsoon yahay
Ku qalabaysan qori isu dheelitiran iyo kaabayaal si loo daboolo dusha kala duwan.
Si fudud loo beddelo shaqooyinka
Ku habboon hagaajinta nooc kasta oo cillad khafiif ah.
Nidaamka Jiida Ilkaha
Dhaqdhaqaaqa hagaajinta jirka, darfaha qolofka sare sida albaabka gawaarida ma fududa in lagu hagaajiyo qalab dhaqameedka ilkaha. Kursiga gaariga ama mashiinka alxanka ee gaasku gaashaaman yahay wuxuu dhaawici karaa jirka.
Nidaamka Cabbiraadda Korantada ee otomatiga ah
MAXIMA EMS III, nidaamka cabbirka heer caalami ah oo la awoodi karo, wuxuu ku saleysan yahay tikniyoolajiyadda jiilka cusub ee qalabka iyo softiweerkaba. Marka lagu daro taariikhaha gawaarida khaaska ah ee khadka tooska ah (oo daboolaya in ka badan 15,000 moodal), waa waxtar iyo fududahay in la shaqeeyo.